★မြန်မာ့အလင်း★: လူကျင့်ဝတ်နဲ့ လက်တွေ့ကျကျ 2010
ကျုပ်တို့ပြောတာ လက်ခံနိုင်ရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နအဖ၊ ဒီမို၊ တတိယလူတွေဟာ နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အချိန်အများစုဟာလည်း နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာ တွေးခေါ်စဉ်းစားနေသူတွေမိုလို့ အရည်အချင်းရှိသူတွေပါ။ သူတို့ရင်ထဲမှာ အမုန်းအဃာတတွေ၊ ဒေါသတွေ ပြည့်နှက်နေတော့ အသိစိတ်တွေကင်းမဲ့နေတယ်။ သံကိုသံချေးတက်နေသကဲ့သို့ သူတို့ ဥာဏ်မှာ စဉ်းစားနိုင်စွမ်းတွေ ကင်းမဲ့နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် အရေမရအဖတ်မရ စောက်တင်းပြော ၊ စောက်ပြစ်တင်၊ စောက်ရန်ဖြစ် စောက်ငြင်းခုံမှုတွေစတာတွေနဲ့ အချိန်တွေဖြုံန်းနေကြတာပါ။
2010 ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသူတွေက ထောက်ခံဖို့ စည်းရုံးနေတယ်။ ဆန့်ကျင်သူတွေကလည်း အကြောင်းပေါင်းမျိုးစုံပြသပြီး ဆန့်ကျင်ဖို့ ဆော်သြေနေတယ်။ အဲလိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်နေတာ လပေါင်းများစွာ ရှိပါပြီ။ လူထုအနေနဲ့ ဆန့်ကျင်သင့်လား လက်ခံသင့်လားဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေရရှိ ပါပြီ။ နောက်ထပ်ဆက်ပြီး တင်ပြစရာမလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် . . . အခုအချိန်အထိ ဆန့်ကျင်ဖိုနဲ့ ထောက်ခံဖို့ ပြောဆိုမှုတွေဟာ စည်းရုံးနေတယ်လို့မခေါ်ဘူး။ စည်းရုံးတယ်ဆိုတာ ၃ - ၄ လလောက် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြောပြရပါမယ်။ အဲဒီနောက်တော့ လက်ခံတာ မခံတာက သူတို့အပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ။ လူတွေကို သူတို့ဖာသာစဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလိုက်ရမှာပါ။ ကျုပ်တို့ဆန္ဒနဲ့အတူတူသူတို့ ဆုံးဖြတ်ချင် ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ ကွာခြားချင် ကွာခြားပါမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံရမှာပါ။ အခုလောက်အချိန်အကြာကြီးပြောဆိုနေတာဟာ ငါ့ပြောစကားကို လက်မခံရကောင်းလားဆိုပြီး အတင်းဇွတ်ရိုက်သွင်းနေတဲ့ အနေအထားပါ။
ဒီအပြုအမူဟာ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမယ့်. . . . ငါစဉ်းစားသလို စဉ်းစားရမယ်. . . ငါတွေးသလို တွေးရမယ် . . . ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အတူတူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်နေပါတယ်။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုအရပဲဖြစ်ဖြစ် . . . ဒီမိုဝါဒအရပဲဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ မမှန်ကန်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောရင် လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖေါက်တာပဲ။ သေနတ်နဲ့ထောက်ပြီး မိမိဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ခိုင်းတာဟာ အဏာရှင်လုပ်ရပ်ဖြစ်သလိုပဲ. . . ငါဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်ရလေသလားဆိုပြီး အမြဲဆိုသလို မိမိဝါဒကိုရိုက်သွင်းနေရင်.. ဒါဟာလည်း အဏာရှင်စိတ်ထားပါပဲ။
ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံတဲ့သူတွေက ဒီမိုရဖို့တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလိုပြောနေရတာ။ ကန့်ကွက်သူတွေကလဲ စစ်အစိုးရကို တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမိုလို့ အန္တာရယ်များတယ်.. .. ဒါ့ကြောင့်ပြောနေရတာဆိုပြီး အကြောင်းပြချက်တွေရှိပါတယ်။ ကျုပ်တို့ပြောသလိုပဲ… မိမိစိုးရိမ်စိတ်.. မိမိအမြင်ကို အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာပဲ ဖေါ်ပြသင့်ပါတယ်။ အဲဒီထက်ကျော်လာရင်တော့ စိုးရိမ်စိတ်မဟုတ်တော့ပဲ တပါးသူအပေါ်မှာ စိုးမိုးလိုတဲ့ စိတ်သာဖြစ်နေတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အဏာရှင် စိတ်ဓါတ်ပဲ။ ဒါကြောင့် 2010ကို ထောက်ခံဖို့စည်းရုံးတယ်ဆိုတာတွေ… 2010ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ လှု့ဆော်တာတွေကို ရပ်ပါတော့။ ထောက်ခံလိုစိတ်ရှိသူက ထောက်ခံပါစေ။ ဆန့်ကျင်လိုစိတ်ရှိသူက ဆန့်ကျင်ပါစေ။ ငါ့ဆုံးဖြတ်သလို မဆုံးဖြတ်လို့ဆိုပြီး ဇွတ်ကြီး မပြောပါနဲ့တော့။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလည်း မတိုက်ခတ်ပါနဲ့။ အဲဒီအပြောအဆိုတွေဟာ အင်မတန်ကို ရိုင်းစိုင်းပြီး အောက်တန်းကျပါတယ်။
အကြံပြုလိုတာက . . . အခုအချိန်မှာ အမြင်မတူတဲ့သူတွေ ညှိနှိုင်းရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိမိဆုံးဖြတ်ထားတာကို ဦးတည်ပြီးအကောင်အထည်ဖေါ်သွားရမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်တူကိုယ်တူတွေပဲ ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ကြပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံတဲ့သူတွေရဲ့ ဘလော့နဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေ ရေးသားခြင်းမပြုပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားပေးပါ။ ထို့အတူပဲ ဆန့်ကျင်သူတွေရေးသားနေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာ ထောက်ခံဖို့ ပြောဆိုချင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို စစ်အဏာရှင်အောက်မရောက်စေလိုတဲ့ စိတ်ကိုအခြေခံပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်ဖို့ကြိုးစားမှုကို အမြင်မတူပေမယ့် လက်ခံပေးကြပါ။ လူတိုင်းမှာ မိမိယုံကြည်ရာကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသလို... ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုဖြစ်မြောက်အောင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ( ဒါပေမယ့် 2010ကို ထောက်ခံဖို့ / ဆန့်ကျင်ဖို့ စည်းရုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ၀ိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြပါ။)
ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေအားလုံးက ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံဖို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖို့အတွက် အခြေတင်ငြင်းခုံမှုမှာပဲ ထပ်နေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ အဲဒါပဲလုပ်ရမလားဆိုပြီး အမှတ်မှားနေကြမှာပါ။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ 2010 ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံသူတွေ အနေနဲ့ ဆန့်ကျင်သူတွေကို ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။ (သဘောမတူရင် သူဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆန့်ကျင်ပါစေ) မိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်း လုပ်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ ၀င်ပြိုင်မယ့် ပါတီတွေအကြောင်း၊ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မူဝါဒ၊ လွှတ်တော်၊ မဲဆန္ဒနယ်၊ အခြေခံဥပဒေ စတဲ့ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ကြရပါမယ်။ လုပ်စရာနဲ့ပြောစရာတွေက ရေတွက်မပြနိုင်အောင် များပြားလှပါတယ်။ အဲလောက်များပြားလှတဲ့ ကိစ္စတွေကို မေ့ထားပြီး အခုထက်ထိ 2010ကို ထောက်ခံဖို့ စည်းရုံးရေးကို တရားဟောနေမယ်ဆိုရင် တော်တော်ကို မှားယွင်းတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်လိုသူတွေ အနေနဲ့လည်း. . . မိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်း လုပ်ကိုင်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် မိမိနဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေကို မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။ အဲလိုတိုက်ခိုက်တော့ ဘာအကျိုးရှိမှာမို့လဲ? ရွေးကောက်ပွဲကြီးက ပျက်သွားမှာလား? အဲဒါတွေဟာ လုံးဝ အကျိုးမရှိပါဘူး။ စကားစပ်လို့ သတိပေးလိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲ ဆန့်ကျင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေခံဥပဒေကို လုံးဝ . . . လုံးဝကို. . . ဆန့်ကျင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ လိုလိုလားလားနဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာပဲ။ NO လုပ်ဆိုပြီး အနီရောင်အင်္ကျီတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ခဲ့တာ မှတ်မိသေးရဲ့လား? (ဗီဒီယို) ယှဉ်ပြိုင်တုံးက ယှဉ်ပြိုင်ပြီး . . .မိမိတို့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်မလာတော့. . ရလဒ်ကို လက်မခံဘူးဆိုပြီး လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီစံနစ်နဲ့ အညီလက်ခံရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့်အခြေခံဥပဒေအပေါ် ဘာမှစောဒကမတက်နဲ့။
အရေးကြီးဆုံးပြောလိုတာက .. ခင်ဗျားတို့က 2010ကို ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ချင်ရင်… ဘာစတိတ်မန့်မှမထုတ်နဲ့။ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကို လက်တွေ့ကျကျ ဘယ်လိုဖျက်ရမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကျပါ။ အဖြေရှာပါ။ သံရုံးရှေးမှာ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင် လူများများရအောင် ကြိုးစားပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ဆန္ဒပြပွဲလုပ်လိုတယ်ဆိုရင် ဖြစ်မြောက်အောင် ကြံဆောင်ပါ။ (အဲဒီလိုဆွေးနွေးမှုမှာ လုံးဝနှောင့်ယှက်မှာမဟုတ်သလို.. နှောင့်ယှက်သူတွေရှိရင်လည်း ကူညီတားဆီးပေးမယ်။ လက်တွေ့သမားတွေကို အားပေးပါတယ်) မေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံသူတွေကိုတော့ အနှောင့်အယှက်မပေးပါနဲ့။ အကြမ်းဖက်တာတွေ.. ဗုံးဖေါက်တာတွေတော့ မပြုလုပ်ကြပါနဲ့။ အဲဒါတွေက ဒီမိုကရေစီမကျသလိုပဲ… လူကျင့်ဝတ်နဲ့လည်းမညီညွတ်ပါဘူး။
အကျဉ်းချုပ်ပြောလိုတာက. . . ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံရင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ညီအောင် ပါတီတွေအကြောင်း.. အမတ်တွေအကြောင်း.. မူဝါဒစတဲ့အကျိုးရှိတာတွေကို ဆွေးနွေးကြပါ။ 2010ကို ထောက်ခံဖို့ ဆက်ပြီး မစည်းရုံးကြပါနဲ့။ ဆန့်ကျင်သူတွေကလည်း အကျိုးမရှိပဲ အချိန်မဖြုံးပါနဲ့။ လူအင်အားစုစည်းဖို့လိုရင် စုစည်းပါ။ လုပ်သင့်တာ လုပ်ကြပါ။ 2010ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ /လက်ခံဖို့ ငြင်းခုံရမယ့်အချိန်ကာလ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိမိယုံကြည်ရာကို လက်တွေ့ကျကျလုပ် ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရမယ့်အချိန်သာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်လုံးလုံး အရေမရအဖတ်မရ ငြင်းခုံတဲ့အကျင့်တွေဖျောက်ပြီး . . .လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြပါတော့။ ဒို့ပြည်ကို ချစ်ကြပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 1:18 PM